Wararka ugu danbeeyay Sacuudiga oo la wareegayo Newcastle United | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka ugu danbeeyay Sacuudiga oo la wareegayo Newcastle United
Sacuudi Carabiya ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhowdahay inay dhammaystirto la wareegitaanka kooxda ka ciyaarta Premier League ee Newcastle United , iyadoo kooxdu ku rajo weyn tahay in lagu dhawaaqo Khamiista maanta.
Warka ayaa daba socda baaritaan ka yimid Premier League, iyada oo loo malaynayo in dawladda Sucuudigu ay awood u yeelanayso maamulka kooxda.
Sida laga soo xigtay BBC Sport , Sanduuqa Maalgashiga Dadweynaha, oo lagu wado inuu bixiyo 80% heshiiska £ 300m, ayaa taa bedelkeeda loola dhaqmaa sidii maamul u gaar ah dawladda, taas oo u oggolaanaysa la wareegitaanka inuu sii socdo.
Isku -day la -wareegidda Magpies -ka ayaa bilaabmay 18 bilood ka hor, iyada oo dallad ay hor -taallo Amanda Staveley , ka hor intii aan la isku dayin in la is -hortaago ka dib muranka baahinta beIN Sports.
Heshiis la dhammaystiray ayaa lahaan doona lahaanshaha Mike Ashley ee kooxda Waqooyi Bari kadib 14 sano oo uu hoggaanka hayay.
Previous articleManchester United oo iibineysa labo kamid ah xidigaha kooxda si ay ula soo wareegto Declan Rice
Next articleQatar iyo Imaaraadka Carabta oo isku soo dhowaanaya – Maxaa shalay dhacay?
Ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha Caawa oo aad Habeen walbo kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com Tabarihii hore ee Chelsea, Inter iyo kooxda...